Tonga amin'ny taona ny dokam-barotra Podcast
Zoma, Febroary 9, 2018 Asabotsy 10 Febroary 2018 Douglas Karr
Miaraka amin'ny fitomboan'ny podcasting tsy mampino nandritra ny taona maro, tsapako ho toa niadana ny fampifanarahana ny teknolojia fanaovana dokambarotra tamin'io. Tsy misy antony kely na tsy antony tsy itondrana ny paikadin'ny dokam-barotra mitovy amin'ny horonantsary amin'ny podcasting - na doka alohan'ny horonan-tsary aza, ohatra. Ny doka nampidirina tamin'ny dinamika dia nampitombo ny ampahany amin'ny fandaniany doka amin'ny 51% nanomboka ny taona 2015 ka hatramin'ny 2016 araka ny fanadihadiana natao tamin'ny IAB Podcast Ad Revenue. manantena aho
Mamihina ny mpankahala anao? Angamba Tiavo ireo malalanao!
Alarobia, Aprily 15, 2015 Alatsinainy Aprily 20, 2015 Douglas Karr
Ny teny famaranana nataon'i Jay Baer dia iray amin'ireo tsara indrindra hitako tao amin'ny tontolon'ny varotra sosialy. Niresaka momba ny boky ho avy, Hug Your Haters i Jay. Ny fampisehoana nataony dia nahafinaritra ary naneso ny fikarohana mahatalanjona nataon'i Tom Webster sy ny ekipany momba ny fomba hampitomboan'ny orinasanao haingana ny varotrao amin'ny fandrosoana haingana. Ny fampisehoana dia miresaka ohatra tsara dia tsara momba ireo orinasa mamaly ny fitarainana sy ny fomba tsara amin'ny orinasa. Tsy mino aho. Raha ny tena izy,
Ny herinandro vitsivitsy lasa izay dia tany ivelan'ny tanàna aho ary tsy afaka nanokana fotoana betsaka hanoratana atiny toy ny mahazatra ahy. Tsy nandroaka lahatsoratra antsasaky ny boriky aho, fantatro fa fotoanan'ny fialantsasatra ho an'ny mpamaky maro ihany koa aho ary nisafidy ny tsy hanoratra isan'andro fotsiny aho. Taorian'ny fanoratana folo taona dia izany no zavatra mahalasa adala ahy - ampahany fotsiny amin'ny fanoratana
Araho ny mpanentana ny haino aman-jery sosialy ambony 2014
Alakamisy, Septambra 4, 2014 Alakamisy, Septambra 4, 2014 Douglas Karr
Dr. Jim Barry ao amin'ny bilaogy Edu-Tainment Marketing momba ny votoaty sosialy dia nametraka ny lisitr'ireo mpiorina amin'ny haino aman-jery sosialy (miaraka aminao tokoa!). Ny Dokotera tsara dia nanoratra lahatsoratra mahavariana sy feno antsipiriany momba ireo archetypes 4 naterak'ireo fitaomana ireo, mamaritra ny toetra sy ny karazana fitaomana ananany eo amin'ny sehatry ny indostria, ao anatin'izany: Mpanabe - manome fanampiana sy fahitana Mpanazatra - mandray anjara sy manampy (ho hitanao izaho eto!) Mpialamboly - mirotsaha ary